Linux mitambo yevakomana. Aya ndiwo akanakisa egore 2019 | Linux Vakapindwa muropa
Linux mitambo yevakomana. Aya ndiwo akanakisa e2019
Vakomana ndivo vanotamba nemakomputa zvakanyanya. Uye avo vanogadzira mazita eLinux havana kuvakanganwa. Mune ino post ticha kunyora mazita akanyanya kuvhota semitambo yakanakisa yekutamba nevakomana mu2019.
Tiri kuvimba ne vhoti yakaitwa nevaverengi veiyo portal Kutamba PaLinux. Kana iwe uine maonero akasiyana, bvumirana nemhedzisiro kana paine zita raungade kuwedzera, unogona kuzviita mune fomu yekutaura.
1 Linux mitambo yevakomana. Pano isu tine mashanu akanakisa e5
1.1 SuperTuxKart (Winner)
1.2 Pfuti Varimi
1.3 Migwagwa yeRogue
1.5 Knights Uye Mabhasikoro
2 Zvimwe zvinyorwa zviri munhevedzano
Linux mitambo yevakomana. Pano isu tine mashanu akanakisa e5
Isu tinodzokorora mhedzisiro neari kuhwina weboka rezvese.
Handizive kana ndiwo mutambo wandaizotamba nevana vangu. Mimwe yemiyedzo inosanganisira kugona kubvisa vako vanokwikwidza nemakeke ekirimu kana bowling mabhora. Asi ichokwadi kuti inonakidza kwazvo.
Mutambi wega wega anosarudza imwe yemascot kubva kune akasiyana emahara software mapurojekiti uye anovatungamira mumarudzi ega ega kana mubairo muhombe. Imwe yeiyi bvunzo inoitika mune 3d mifananidzo inomiririra zvakasikwa, zvemukati kana zvekufungidzira zviitiko. Unogona chete kuwana mamwe acho mushure mekunge wawana imwe zvibodzwa
Kune mhando dzakasiyana dzemakwikwi; nguva yekutongwa, tevera mutungamiri, nhabvu, tora mureza uye maviri marudzi ehondo modhi
SuperTuxKart ine maviri emamodhi modhi, emuno kana epamhepo. Nekunyoresa iwe unowana mukana wekutora zvimwe zvemukati zvemukati. Asi tora chenjedzo yekunyora pasi pasiwedhi. Iko hakuna sarudzo yekuidzosa.
Iwe unoda here kufara pamwe nevana vako uye kudzidzisa mavari rudo rwekurima? Uyu ndiwo mutambo wako.
Shotgun Varimi mutambo wekupfura nehunhu hwekuti kupotsa-kurova mabara kunoita kuti zvimwe zvombo zvikure. Zvombo hazvigone kudzoreredzwa, asi iwe unogona kuunganidza iwo akakura kubva kune ako akapotsa pfuti kana kudonhedza mabara pasi. Kana ukavarega vachikura zvakanyanya, chombo chimwe nechimwe chichava nacho. Asi chokwadi, kuwanda kwepfuti kwaunosuwa, ndidzo nhumbi dzaunopa vavengi vako.
Mutambo unotsigira single player kana multiplayer (online) mode. Iyo JUMultiplayer egos inogona kutambidzwa mu password-yakachengetedzwa yeruzhinji kana yakavanzika machisi. Mimwe yemitambo modhi ndeiyi; dzinga huku, tora nguruve yemuvengi kana kudzivirira scarecrow.
Pano tine mutambo wejeri repasi pevhu asi chii inoitika muguta rinoshanda rakagadzirwa nemaitiro, mune akaomesesa enjere enjodzi kudzora vagari vemarudzi ese, vanongoedza kuita zviitiko zvavo zvezuva nezuva.
Kufambira mberi, mutambi anofanirwa kuzadzisa zvinangwa zvebasa rake munzira ipi neipi yaanoona ichikwanisika nekushandisa akakosha kugona kwehunhu hwako, zvinhu uye nharaunda. Ichave sarudzo dzaunoita dzinoita mutsauko.
Mune ino kesi isu tinokurudzirwa mutambo wekutsvaga wakaiswa mune imwe nyika isingazivikanwe asi inotamba uko zvisiri zvese zvinofara sezvazvinoratidzika. Basa redu ndere Batsira vatambi vasinganzwisisike kukunda matambudziko, kufumura yakaoma rangano, uye kuronga chimurenga. Zvese izvi mune mamiriro apo zvinhu zvisina mhosva sezvazvinoratidzika.
Pikuniku inopa chimwe chinhu kumazera ese. Pakati pezvinhu zvatinogona kuita pamwe nevadiki zvinosanganisira:
Wongorora, panguva yedu pachedu, nyika izere nemavara. Ikoko isu tichafanirwa kubatsira mavara equirky mumamishini avo asina kujairika, uye kugadzirisa mapuzzle akaoma anozonetsa vadiki nevakuru zvakafanana.
Batira pamwe nemhuri yedu uye shamwari munharaunda munzvimbo dzakasiyana dzinogadziriswa matambudziko.
Sangana neboka revanhu vasingakanganwiki, rimwe nerimwe riine matambudziko avo uye eccentricities.
Knights Uye Mabhasikoro
Uye yaive nguva yekutevedzera chikamu chevakadzi (kusvika panguva ino mune dzino zvakateedzana isu tanga tangowana muroyi uye Mukadzi weRombo uyo, kubva pane izvo zvinoita, aive psychopath chaizvo)
Gara muUK muma80, chiitiko ichi tevera Nessa naDhemelza. Idzi shamwari mbiri dziri kuongorora mahombekombe ePenfurzy nebhasikoro vachitsvaga yakavanzika yakarasika pfuma.
Ivo vaviri, pamwe nehosi yavo uye nemusoro wakachekwa we zombie knight, vanoumba Penfurzy Bike Rebels Club, vakagadzirira kutora chero chiitiko. Pamwe chete ivo vachatarisana nekutyisidzirwa neanobhururuka discs, emvura mabhaluni, ekunyaradza macomputer uye ine simba kurova kweakakudziridzwa boombox.
Vari munzira vanozadza homwe dzavo nezvinhu zvekuvandudza mabhasikoro avo uye kuramba vachipinda mumigwagwa, mabhishi, masango, zvinokwezva uye matongo ekare echitsuwa.
Zvimwe zvinyorwa zviri munhevedzano
Zvishandiso zvakanakisa zvekugadzira mitambo paLinux
Akanakisa Mahara uye Akavhurika Source Software Mitambo 2019
Yakanakisa mitambo mipfupi yeLinux 2019
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux mitambo yevakomana. Aya ndiwo akanakisa e2019
Mifananidzo ndapota! Tichaona kana ndichigona kumhanya navo pane yangu michina shit.
Ini ndinovimbisa zvinodiwa zvehardware zvekupera kwechinyorwa chakateedzana. Mugovera panguva yekupedzisira
Wadonhedza imwe machismo muchinyorwa, handiti? Kuti utsvage clickbait, haufanire kunge uchityisa.
Pindura kuna Exprexx777
Pandinonyora tech zvinyorwa ini ndinonyora tech zvinyorwa. Kana iwe uchida kutsvaga zvakavanzika zvinoreva, verenga huporofita hwaNostradamus
Iyo nyowani vhezheni yeIPFire 2.25 Core 141 yatogadzirira uye idzi ndidzo shanduko
Manjaro 19.0 Kyria yava pamutemo, neLinux 5.4 LTS uye idzi dzimwe nhau